Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China na -e stoneomi nkume aluminom Chenyu
Ihe mkpuchi aluminom nke nkume na-asachapụ onwe ya, yana mkpuchi fluorocarbon nwere usoro pụrụ iche nke KYNAR500, nke mere na uzuzu a wetara na mkpuchi aluminom na gburugburu enweghị ike imetọ ma ọlị, yabụ na ọ nwere nhicha dị nro ma sie ike.
1. Na-adịgide adịgide, anaghị ada ada,
2. Nchedo gburugburu ebe obibi, mgbochi ọkụ, ihe akaebe mmiri,
3. Enwere ike ịhazi ụdị dị iche iche, ụkpụrụ, agba dị ka ihe onye ọrụ chọrọ si dị.
4. Ezi flatness, mgbochi mmiri na mgbochi mmanụ
5. Magburu onwe corrosion eguzogide, iguzogide mmiri, UV
6. Ihe mkpuchi ọkụ na-enweghị ntụpọ, ihe na-egbochi mmiri na ọrụ na-eguzogide corrosion, mmịpụta ụda, arụmọrụ mkpuchi ọkụ dị mma, mmịpụta ụda zuru oke.
7. Efere mpekere aluminom nwere kọmpat kọmpat na enweghị nkebi, nke enweghị ike idobe ihe ọ bụla na -achaghị agba afọ 20;
8. Ndị na-adịghị egbu egbu, ndị na-atọghị ụtọ, ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, na-emegharị 100%
Tụnyere ihe ndị ọzọ
Aluminom dị ọtụtụ. E jiri ya tụnyere ọtụtụ ọla ndị ọzọ, ọ na -adịkarị mfe ma dị mfe ịrụ ọrụ. Ọ na -eguzogide oke nchara, na -eme ka ọ dị mma maka ngwa ime ụlọ na n'èzí.
Nke kachasị mkpa, aluminom bụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị n'elu ụlọ nke bara uru itinye ego ya. N'ihe banyere ịdịte aka, panel nke nwere oghere nke aluminom so n'ime ndị kacha adịte aka na ogologo oge. Nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ebe a na -achọ mma iji gbochie mkpọtụ na njikwa ọkụ nke mgbidi.
Maka udi, ụdị, agba, ụkpụrụ nke aluminom nke nwere oghere, ị nwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ị na -emebe ya. Ọ dịkwa mfe ịwụnye otu ihe ahụ ma a bịa na ọrụ gị.
Nke gara aga: Imitomi osisi ọka aluminom mkpuchi
Osote: Ihe mkpuchi mkpuchi aluminom